मन्त्री हुन किन मरिहत्ते गर्छन् भन्ने मज्जैसँग बुझेँ | Nagarik News - Nepal Republic Media
मन्त्री हुन किन मरिहत्ते गर्छन् भन्ने मज्जैसँग बुझेँ
नागरिक संवादमा चित्रबहादुर केसी
३० श्रावण २०७३ ३३ मिनेट पाठ
तपाईँ बस्ने कोठा त साँघुरो रहेछ त?
अलि साँघुरै छ। जब बालुवाटारबाट सपथ लिएर यता (घट्टेकुलो)मा आएँ, यहाँ त धेरै भिड भइसकेछ। बाहिर पनि उत्तिकै, भित्र पनि उत्तिकै भीड भएपछि म त आत्तिएँ। त्यसपछि कुपोन्डोलतिर भाग्नु परिहाल्यो। जाने बेला घरबेटीलाई भनेँ, …यो घर मैले छाडेको छैन है, फेरि आउँछु।’ अहिले यतै आएँ।
नियुक्ति हुने बेलामा घरभरि मान्छे थिए, छाडेपछि आए कि आएनन् त?
किन यस्तो भएको रहेछ?
सत्ता गएपछि लुट्न नै गएको भन्ने जनताको अनुभूति हुने रहेछ। गएकाको पनि उद्देश्य लुट्ने भन्ने नै हुने रहेछ। जनता र राष्ट्रको चिन्ताभन्दा पनि आफ्नो चिन्ता, आफ्नो परिवारको चिन्ता, आफ्ना नातेदारको चिन्ता, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको चिन्ता देखाउँदा रहेछन्। देशका मन्त्री नै नहुने रहेछन्। सबैजसो त परिवारको, निर्वाचनको क्षेत्रको, जिल्लाको मन्त्री पो हुने रहेछन्!
भनेपछि त भित्र मन्त्री भएर बस्दाभन्दा बाहिर रहँदा बढी फाइदा हुने रहेछ?
हिजो भक्तपुर गएको थिएँ। बसमा आउँदा–जाँदा नै त्यहीँ सभाजस्तै भयो। जनतासँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्न पाइयो। मन्त्री हुँदा त मलाई सेनाले घेर्ने, प्रहरीले घेर्ने, अलिकति केही खुकुलो हौ न त भनौँ भने सुरक्षाको कुरा आउँछ भन्ने हुनाले आफूलाई बन्धनमा परेजस्तो महसुस हुन्थ्यो।
बसमा चाहिँ कस्ता कुरा गरे त?
मन्त्री हुँदा कस्ता–कस्ता दबाब आए, आउँदा रहेछन्?
तपाईंले चाहिँ आफ्ना पार्टीका मान्छेमध्ये मन्त्रालयमा कतिलाई नियुक्त गर्नुभयो त?
जम्मा दुई जना साथीलाई सल्लाहकार राखेँ, एक जना सांसद हुँदाकै स्वकीय सचिव थिए। एक जना कम्प्युटर अपरेटर राखेँ र अर्का नाताले छोरी पर्नेलाई राख्न खोजेँ तर योग्यता पुगेन, राख्न सकिएन। बाबु मन्त्री छ, छोरीले आशा स्वाभाविक गर्छे नै, गरी तर मिलेन। सबैभन्दा बढी समस्या चाहिँ के देखेँ भने आफ्नो मान्छे भएपछि कुनै पनि काम गरेन भनेर चित्त दुखाइदिने रहेछन्। यो दुर्गुण सत्तामा पुगेपछि देखेँ।
मन्त्रालयमा नहुने काम गराउन लाग्नेको भीड नै हुन्छ भनिन्छ, त्यस्तो पाउनु भयो?
आफूलाई कसरी जोगाउनु भयो त?
कात्तिक २० गते जुन दिन तपार्इंले सपथ लिनु भयो, केही योजना बनाउनु भएको थियो?
के हुँदोरहेछ त्यहाँ?
यस्तो अव्यवस्था देख्दा कहिलेकाहीँ छाडौं जस्तो पनि लाग्यो होला?
साउन २० गते त्यहाँबाट बाहिरिँदा सम्झना गर्न लायक काम के के गर्नुभयो?
मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई भन्नु भएन?
प्रधानमन्त्रीले केही भन्नु भएन?
के थियो र त्यो ऐनमा?
यदि त्यो ऐन पास भयो भने मुलुकलाई के फाइदा हुन्छ?
भनेपछि नौ महिना बस्दा पनि एउटा ऐन पनि पास गराउन सक्नु भएन भनेपछि यो व्यवस्थाबाट परिवर्तन महसुस गर्न मुश्किल छ, हैन त?
राजनैतिक सिद्धान्तको आधारमा तपाईंको सपना अझै पूरा भएको छैन तर यो पछिल्लो लोकतान्त्रिक परिवर्तनलाई कसरी हेर्नु भएको छ?
भनेपछि संसदीय व्यवस्था नै खराब छ?
देखियो त। खै त यस व्यवस्थाले जनताका आधारभूत समस्याको समाधान गरेको? राणा शासन र एकल परिवारिक शासनभन्दा त यो उत्तम नै छ। सरकारको विरोध गर्ने, सरकार परिवर्तन गर्ने पूँजीवादी प्रकारको थोरै उपलब्धि भएको त छ तर योभन्दा अलि बढी सामाजिक न्याय हुने व्यवस्था ल्याउन प्रयास गर्नुपर्छ। हाम्रो अन्तिम उद्देश्य त जनवादी व्यवस्था ल्याउनु पर्छ भन्ने नै हो।
साम्यवादमा जाने लक्ष्य देखिन्छ?
जनवादी व्यवस्था आउँछ त?
राणा शासनको व्यवस्थाको विरोध गर्दा सुरुमा पत्याउँदैन थे, पछि त्यो नै गयो। पञ्चायती व्यवस्थाको विरोध गर्दा मान्छेहरु मलाई मजाक बनाउँथे, घरमा बाले नै छिर्न दिनु भएन, नहुने कुरा गर्‍यो भनेर। समय गतिशील छ, परिवर्तनशील छ र सधैँ यथास्थितिमा बस्दैन।
२० वर्ष पहिला सामन्तीहरुलाई ठीक गर्नुपर्छ भन्नु हुन्थ्यो, अहिले ती सामन्तीको अवस्था कस्तो छ?
सरकारमा किन जानु भयो तपाईं?
संघीयता कार्यान्वयन हुनुहुन्न भन्नेमा तपाईंहरु अझै हुनुहुन्छ हैन?
संविधान कार्यान्वयन गर्न जानु भए पनि सरकार ढलिहाल्यो हगि?
देश आफ्नो तरिकारले चल्दो रहेनछ?
उसो भए खेताला प्रयोग गरेर ढालियो!
सरकारमा गएपछि काम त केही गर्नु भएन, गफै गरेर नौ महिना बिताइदिनु भयो?
हैन, काम त संविधान जारी गर्नु, आफ्नो सरकार आफैँ बनाउनु, एउटा देशको मात्रै परनिर्भरतामा रहेको देशलाई अर्को देशसँग पारवाहन सम्झौता, व्यापारिक सन्धिसम्झौता गर्नु उपलब्धि होइन? एउटा देशसँग मात्रै निर्भरता भएर संसारका लागि खुल्ला हुन पाउनु उपलब्धि होइन? केही पनि गरेन भन्ने मिल्छ?
तर, प्रधानमन्त्रीले त हावादारी सपना नै बढी देखाउनु भयो भन्ने आरोप छ नि?
पञ्चायती व्यवस्था फालेर बहुदलीय व्यवस्था ल्याउनुपर्छ भन्दा पञ्चायतका कट्टर र पुरातनवादीहरुले यो तपाईंहरुको हवाई सपना हो भन्थे, खिसिट्युरी गर्दथे। त्यस्तै, राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र ल्याँउछौँभन्दा बौलाहा कुरा भन्थे। यथास्थितिवादीहरुलाई विकासको नयाँ योजना पच्दैन। घरघरमा ग्यास पाइप ल्याउनु पर्छ भन्दा धेरैले खिसिट्युरी गरे, त्यसैमा मात्रै अडकिएर अरु ओझेलमा पारिदिए तर यो त असम्भव कुरा होइन नि! फेरी खिसिटयुरी गर्नेहरुले चाहिँ यो मुलुकका लागि के के गरे त?
आफैँ सरकार बनाउन नदिने, आफैँ स्वविवेकले निर्णय गर्न नदिनेहरुले दुःख दिए कि दिएनन्?
सरकारमा गएपछि र फर्के पछिको पार्टीको अवस्था कस्तो पाउनु भयो, कि कमजोर भयो?
ओलीको सरकारमा जानु भयो तर प्रचण्डको सरकारमा जानु भएन, किन? आखिर पछिल्लो पनि कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार नै थियो!
यो सरकारले केही दिन भित्रमा नै परिणाम देला र छवि पनि सुधार्ला नि त?
किन छवि सुध्रँदैन?
सुरुमा नै मूल्याङ्कन गर्दा त निको नहोला नि?
चैत २० गते पोखरामा प्रचण्डसँग भेट हुँदा मैले भनेको थिएँ, …हेर्नुहोस प्रचण्डजी, नेपाली कांग्रेस र भारतको आशाको केन्द्र तपाईं हो, तपाईंबाट नै केही गराउन सकिन्छ भनेर यी दुवै शक्तिकेन्द्र लागिरहेका छन्।' जवाफमा प्रचण्डले गौरवका साथ भन्नुभयो, …मलाई छिमेकीले राष्ट्रपति हुनुहोस् भनेका थिए, मैले मानिनँ, प्रधानमन्त्री हुनुहोस् भनेका थिए, मैले मानिनँ।' यो देशको राष्ट्रपति, यो देशको प्रधानमन्त्री अरु कसैले बनाइदिने र बन्ने कुरामा प्रचण्डजीलाई गौरव लाग्ने रहेछ भन्ने लागेपछि मलाई भने आत्मग्लानि भयो। मैले यसो भनेकै दिनमा शेरबहादुरसँग मिलिकन, महरा दिल्ली गएर आइकन, दिल्लीमा जे योजना बनेको थियो, त्यसको कार्यान्वयन गर्न बैशाख २२ गते प्रयत्न भइहाल्यो। त्यसकारण पनि नयाँ संविधान कार्यान्वयन गराउन, नेपालको जातीय क्षेत्रीय सद्भाव बलियो बनाउनका लागि यो खेल भएको छैन।
तपाईंको बुझाइमा जारी संविधान कार्यान्वयन हुँदैन?
कठिन छ। सकेसम्म आफूअनुकूलको संविधान संशोधन गराउने प्रयत्न हुनेछ। संविधान संशोधन गर्न हुँदैन भन्ने पक्षमा म छैन तर नेपाल र नेपालीको आवश्यक्तालाई हेरेर संशोधन गर्ने हो। छिमेकी र अरु कसैका लागि त संविधान संशोधन गर्ने होइन, त्यसमा सहमत छैनौं।
आफूअनुकूल भन्नेमा के–के पर्छन्, केही बुझ्नु भएको छ?
के चाहेको रहेछ?
तपाईंहरु हुँदा चाहिँ संविधान कार्यान्वयन हुने तर प्रचण्ड हुँदा चाहिँ नहुने भन्ने हुन्छ र?
विदेशी चलखेल तीव्र छ मुलुकमा?
राजनीति कस्तो भयो?
जनता पनि दोषी छन्?
देशको चिन्ता गर्नेहरु कम छन् मुलुकमा?
मन्त्रालयमा कति समय बिताउनु हुन्थ्यो?
मन्त्रालय पस्ने बेला र निस्कने बेलामा केही फरक अनुभुती गर्नु भयो?
मन्त्रालय बस्दा काम गराउनका लागि भन्दै पैसाका अफर पनि आए होलान्?
नौ महिनालाई कसरी सम्झनु हुन्छ?
प्रकाशित: ३० श्रावण २०७३ ०९:२४ आइतबार